Home Wararka Maamulka degmada Jowhar oo ka hadlay dagaalkii ka dhacday Jowhar iyo deegaano...
Maamulka degmada Jowhar oo ka hadlay dagaalkii ka dhacday Jowhar iyo deegaano ku dhaw
Maamulka degmada Jowhar ayaa ka dagaalkii ka dhacay degaano ka tirsan Degmada Jowhar. Taliyaha Saldhigga Booliska magaalada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaa sheegay in kooxdii shalay soo weerartay magaalada Jowhar ay ahaayeen shufto dhibaato ku haysay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Sh/dhexe.
Waxaa sidoo kale lagu soo bandhigey maxaabiis iyo hub la sheegay in lagu qabtay dagaalkii shalay ka dhacay Magaalada Jowhar.
Maxaabiista la soo bandhigay ayaa gaaraya ilaa lix oo 5 kamid ah ay Booliska Hir-Shabeelle horay u xireen, halka midka lixaadna uu ku dhaawacmay dagaalkii shalay.
“Waxaan ka codsanaynaa shacabka inay nalaga shaqeeyaan sidii bulshada looga qaban lahaa shuftada caadeysatay inay dadka dhibaateeyaan,”ayuu yiri taliye Canjeex.
Dagaalkii shalay ka dhacay Magaalada Jowhar ayaa waxaa ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray qaar kamid ah ciidamo isugu jira Boolis,Haramcad iyo Milatari.
Qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay iskahorimaadka ayaa saaka loo duuliyay magaalada Muqdisho si loogu soo dabiibo. Xaalada magaalada Jowhar ayaa degen saaka inkastoo ay weli jirto cabsi laga qabo in dagaalka markale soo cusboonaado.